ခွေးနှင့်အတူခရီးသွားလာ - သင်ကျိန်းသေစဉ်းစားရန်လိုအပ်ကဘာလဲ
ခွေးတို့ကခရီးသွားလာရဲ့ start ခင်မှာ
ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးမှာရေတွင်းတစ်တွင်း-ထိုက်တန်တဲ့မိသားစုအားလပ်ရက်ရဲ့, ဒါပေမယ့်ငါချစ်သော Fellnase နှင့်အတူဘာလုပ်ရမှန်းကတည်းက? ဒါဟာခွေးအကြီးအခရီးအဖြစ်အတူတူယူထက်သူငယ်ချင်းဆွေမျိုးသားချင်းသို့မဟုတ်ခွေးဂေဟာအတွက်နှငျ့အတူသူ့ကိုထားခဲ့ဖို့ ပို. ပို. ရေပန်းစားသည်။ ခွေးနှင့်အတူခရီးသွားသည့်အခါဒါပေမယ့်တချို့၏ထင်ထားရပါမည်!
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ခွေးအများဆုံးများအတွက်မိသားစုတစ်ခုအပြည့်အဝပေါင်းစည်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်တစ်စက္ကန့်မိသားစုခွေးနှင့်အတူနှစ်စဉ်အားလပ်ရက်စီစဉ်နှင့်သူတို့နှင့်အတူအများကြီးပိုအဖွဲ့အစည်းနှင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးတတ်၏။ သငျသညျအရာခပ်သိမ်းနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်လုံးဝအားလပ်ရက်ရဲ့ start မတိုင်မီပြုသောအမှုများနှင့်ရှင်းလင်းရမည်ဖြစ်သည်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်တယ်ဘယ်အရာကိုဒီမှာ click လုပ်ပါ။
တစ်ဦးသင့်လျော်သောဦးတည်ရာကိုပေါ်ပထမဦးစွာအတှေးအဖြစ်မိမိတို့ကိုယ်ကိုလုပ်သင့်တယ်, သင်သည်နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များတွင်အားလပ်ရက်အပေါ်လေးအတော်များများကမျက်စိအဆွေခင်ပွန်း၏အကျွမ်းတဝင်ကုမ္ပဏီအရှုံးမပေးချင်ကြဘူး။ ဤတွင်နိုင်ငံအားလုံးမေးခွန်းတစ်ခုကိုမလာ။ ဤသည်သာလူမဒါပေမယ့်လည်းခွေးညျ့အဝပေးရန်အားလပ်ရက်ကိုခံစားနိုငျသညျ, ဒါကြောင့်သင်တို့ရှိသမျှပါဝင်ပတ်သက်များ၏တစ်ဦးချင်းလိုအပ်ချက်နှင့်အတူကိုင်တွယ်သင့်ပါတယ်။
ဒါပူနှင့်စိုစွတ်သောမယ့်အခါ, ခွေးသည်ကပိုသာယာသည်။ ထို့အပြင်အရိပ်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်သင့်နှင့်ခွေးကိုအိမ်တအိမ်သို့မဟုတ်တိုက်ခန်းတစ်ခန်း၏မှောင်မိုက်ထောင့်တွင်အနားယူရန်အခွင့်အလမ်းကိုပေးတော်မူရပါမည်။
သငျသညျဟိုတယ်ထဲမှာခွေးမှာအားလုံးခွင့်ပြုထားပါသည်ရှိမရှိတိုက်ရိုက်မေးမြန်းပါ, တစ်ဦးဟိုတယ်အတွက် holiday ချင်ပါတယ်။ မကြာခဏသို့သော်ဒီသေးငယ်တဲ့ဝန်ပိုအဘို့အဖြစ်နိုင်သည်။
ပိုများသောအာရုံကိုသငျသညျပွညျကိုသူ့ဟာသူပေးဆောင်သင့်ပါတယ်။ ခွေးအစဉ်အဆက်အဲဒီမှာခွင့်ပြုခဲ့ပါလျှင်, ခွေးလမ်းညွှန်အဘို့အဘယ်သို့ပြဌာန်းချက်ရှိသနညျး ကားတစ်စီးအသုံးပြုပုံရထားသို့မဟုတ်ပင်လေယာဉ်အားဖြင့် - ခရီးရရှိသောအဖြစ်?
သတိမမူခံရဖို့မဖြစ်ကြ entry ကိုလိုအပ်ချက်များကိုဘယ်တိုင်းပြည်နိုင်ငံကနေအမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်သည်။ သတင်းအချက်အလက်အဘို့, လေဆိပ် (လေယာဉ်ဖြင့်ခရီးစဉ်ပစ္စုပ္ပန်လျှင်) သို့မဟုတ်သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံခြားရေးရုံး၏ဝဘ်ဆိုဒ်များပေါ်မှာရှိသမျှအထက်။ အနည်းဆုံးအား6ရက်သတ္တပတ်မတိုင်မီပြည်ပခရီးသွားသည့်အခါခွေးဥပမာ,, ခွေးရူးပြန်ရောဂါဆန့်ကျင်ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်း, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပြီးတော့ခွင့်ပြုသယ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်သငျ့သညျ။
သင်သည်သင်၏တိရိစ္ဆာန်ဆရာထံမှ၎င်းတို့၏ Fellnase နှင့်အတူပေးအပ်ပြီးရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွက်စောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသောအားလပ်ရက်ရဲ့ start ရှေ့တော်၌ထိုခွေးတစ် All-ပတ်ပတ်လည်စစ်ဆေးမှုများလက်အောက်ခံရပါမည်။ အားလပ်ရက်တိုင်းပြည်အတွက် entry ကိုလိုအပ်ချက်နှင့်အညီကာကွယ်ဆေးထိုးနေတုန်းပဲလိုအပ်သောရောက်နေတယ်ဆိုရင်, လက်ျာသည်သင့်တိရိစ္ဆာန်ဆရာပြောဆိုပါ။
A ကောင်းဆုံး VET ပြီးတော့အထဲကထောက်ပြခြင်းနှင့်ပစ်မှတ်တိုင်းပြည်အတွက်ဦးတည်ရာမှာဖြစ်နိုင်သောအန္တရာယ်များအပေါ်တစ်ဦးဆွေးနွေးမှု / အရေးပေါ်၏အမှု၌ယူခံရဖို့လိုအပ်ပါသောအရာကိုကြိုတင်ကာကွယ်မှုများရှင်းပြပါလိမ့်မယ်။
တဦးတည်းရောဂါများအားနည်းချက်မကြာခဏကံကောင်းထောက်မစွာပြည်ပမှာဂျာမနီမှာလျော့နည်းကိုင်တွယ်ရန်ရှိပြီးအဘယ်သူကိုနှင့်အတူရုံတိရိစ္ဆာန်များ။ Leishmaniasis, heartworms နှင့် ehrlichiosis ခြင်-ဘွားနှင့်အလွန်လျင်မြန်စွာဆိုးဝါးအဆုံးသတ်နိုင်မ tick ကူးစက်ရောဂါတချို့ရှိနေပါတယ်။ ဤအမှု၌ကြောင့်အစဉ်အမြဲစိတ်မကောင်းထက်ပိုကောင်းတဲ့လုံခြုံဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်ပိုးရသောအခါအတူတကွတစ်ဦးချင်းစီဆေးဝါးများသင့်ရဲ့ခွေး, ဒါပေမယ့်လည်းအားလပ်ရက်အပေါ်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့မဖြစ်သင့်ကြောင်းအရာအခြို့သာပါဝင်သောသေးငယ်တဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဆေးဆိုင်, ထားရန်လည်းအရေးကြီးပါသည်:
- အတိုဆံပင်ခွေး Sun ကကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း
- မှေးညှပျ, ပိတ်ကျဲစ, မြုံ compression
- Electrolyte တွေအမှုန့်
ဟုတ်ပါတယ်, လူခရီးသွားအိတ်လိုအပ်ပါတယ်လုပ်ပေးမသာ။ အဆိုပါခွေးရှိသည်သောသူအပေါငျးတို့ကဖြေလျော့ပေးခြင်းများနှင့်ပျော်ရွှင်နေဘို့လိုအပ်ပါတယ်ဘာမဟုတ်သေချာပေါက်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမှု၌သော်လည်းဖြစ်သင့်သည်။ လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်လွယ်ကူသောယခင်ကဖန်တီးစစ်ဆေးရမည့်စာရင်းနှင့်အတူ။
အများအပြားအသစ်အအားလပ်ရက်ရှာဖွေတွေ့ရှိချင်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုမတူပဲ - - ဤနေရာတွင်အရေးကြီးလှသည်အိမ်တွင်ခွေးဖို့အကျွမ်းတဝင်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုအရာများနှင့်ချစ်တော်မူ၏။ ဒါကြောင့်ခွေးများအတွက်ပိုမိုလွယ်ကူသည်ဝေးသူ၏နေအိမ်တွင်ရေတွင်းထဲကခံစားနေဆဲဖြစ်သည်။
အားလပ်ရက်အပေါ် Dogs ကို
- ပုံမှန်ထက်အစားအစာ, ရယူထားသော, အရိုးဝါး
- Feed နှင့်ရေဖလား
- ၏ခွေးတောင်းကို / ခေါငျးအုံး / စောင်
- အားလပ်ရက်ရာအရပျအအေးဖျာအတွက်အပူချိန်ပေါ် မူတည်.
- ခရီးသွားရေ Bottle သ
- ကစားစရာ / stuffing တိရစ္ဆာန်များ
- လိုအပ်ပါက muzzle
- ပိတ်ချော, ဟင်းလျာများ, ကော်လာ
- တိုက်ခန်း / ဟိုတယ်၌ & ဖုန်းနံပါတ်နှင့်လိပ်စာ tag ကိုလိပ်စာ
- Kotbeutel, ခွေးပီပီ
- ဘဝ Jacket
သင်သည်သင်၏ခွေးပဲကိုယ့်ကိုကိုယ်လိုပဲခံစားရအားလပ်ရက်အပေါ်ဖြစ်နိုင်သည်ဖြစ်စေအရာရာကိုစဉ်းစားဖူးပါသလော အဆိုပါစစ်ဆေးရမည့်စာရင်းသင့်ရဲ့ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာလေယာဉ်ခရီးစဉ်များနှင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များအတွက်ပြဋ္ဌာန်းချက်ဖို့ Hundetransportbox check လုပ်ထားနှင့်ကိုက်ညီပါလျှင်?